Quik, yakanyanya kunaka sarudzo yekumhanyisa mavhidhiyo pane yako iPhone | IPhone nhau
Quik, yakanyanya kunaka sarudzo yekumhanyisa mavhidhiyo pane yako iPhone
GoPro ikambani yakagara ichizivikanwa nekuyedza kuita kuti vashandisi vave protagonists, vachipa zvese zvivakwa zveizvi. Nekudaro mushandirapamwe wavo wakakurumbira "Iva Gamba" uye zvakare zvavakatenga pane mamwe makambani ekuvandudza maapp, anotora ese mahunyanzvi zvikwata uye maapplication ekupa mamwe sarudzo dzakanaka chaizvo Vashandisi veGoPro nevasiri vashandisi zvakafanana, sezvo Quik inogona kushandiswa nechero ani.
1 Kugadzirisa nekukurumidza
2 Inowanikwa uye kushandiswa
Kiyi yeQuik - iyo iri pachena inokurudzira zita rake muchinangwa chake chekugadzirisa nekukasira - ndiyo fungwa dzakadudzirwa kuti inosanganisa, ayo akajeka uye anoenderana neyakareruka nguva shoma asati aonekwa muvhidhiyo mupepeti we iPhone. Iko kune iwo ematopiki mazhinji uye akatungamirwa kune akasiyana masitayera uye nguva, mamwe achiiswa kune kuratidzwa kwemazhinji mafoto uye mamwe akagadzirirwa kujoina mavhidhiyo.
Imwezve inonakidza ruzivo rwekushandisa ndeyekuti inokwanisa kugadzirisa zvese vhidhiyo yedu yemberi zvinoenderana nenguva yakatarwa yatiri kutsvaga, nekuti vhidhiyo pfupi yemasekondi gumi nemashanu haina kufanana neiyo yakareba kupfuura miniti, semuenzaniso. Template yega yega ine zvakare yakaringana nguva, iyo inozoratidzwa neQuik kana uchiseta nguva yakatarwa.
Inowanikwa uye kushandiswa
Quik inogona kushandiswa neanogona chero mushandisi, nekuti chimiro chayo chinenge chakazara graphical uye haina kana chinetso chero zvacho. Paunenge uchigadzirisa iyo kupinza mavhidhiyo uye kuisa mafirita anotora masekondi mashoma, nekuti zvese zviri matatu skrini inobata zvakanyanya, izvo zvinobatsira kwazvo maitiro ekugadzira.
Kune rimwe divi, iyo interface yanga ichinyatso chenjera uye iri chaizvo zvakanaka kushandisa nguva dzose. Iyo pendi yemavara yakasarudzwa matoni erima anoenderana ese eGoPro zvinoshandiswa, izvo zvakare zvakanaka nekuti zvinoita musiyano uri nani nevhidhiyo uye inotipa pfungwa iri nani yemavara ari pachiratidziri.
Iko kunyorera kuri zvakare dzakasununguka zvachose pasina chero chakabhadharwa zvemukati, chimwe chinhu chekutenda nacho mune iyo maelstrom yekuwedzera yakabhadharwa kurodha pasi yatiri kusangana nayo munguva pfupi yadarika. Kana iwe uchigadzirisa vhidhiyo nguva nenguva pane iyo iPhone kana iwe uchida vhidhiyo masocial network zvakanyanya, zvinongori zvakakosha mune yako terminal.
Quik - GoPro Vhidhiyo Mupepetivakasununguka
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » Quik, yakanyanya kunaka sarudzo yekumhanyisa mavhidhiyo pane yako iPhone
Mathpix, gadzirisa equations neako iPhone kamera
OS X 10.12 inobvumidza iwe kuvhura iyo Mac uchishandisa iyo Kubata ID yeiyo iPhone